फोहोर व्यवस्थापनका लागि जनताबाट उठाइएको १० अर्ब कता हरायो ? (भिडियो) « News24 : Premium News Channel
फोहोर व्यवस्थापनका लागि जनताबाट उठाइएको १० अर्ब कता हरायो ? (भिडियो)
काठमाडौँ । काठमाडौं उपत्यकामा थुप्रने फोहोरको सही व्यवस्थापनका लागि प्रयास थालिएको ४० बर्ष वितिसकेको छ । तर अझै पनि कुनै पनि प्रयासले गति लिन सकेका छैन । फोहोर व्यवस्थापनका लागि अहिलेसम्म ल्याइएका योजनाहरु कुनै पनि प्रभावकारी बन्न नसक्नु र स्थायी बन्न नसक्नु नै मुख्य कमजोरी मानिएका छन् । त्यसमाथि राजनीतिक प्रतिबद्धताको अभाव र दिगो सरकारी नीतिको कमि पनि यस्का लागि समस्या बन्दै आएका छन् ।
उपत्यकाको फोहोरको व्यवस्थापनका लागि पञ्चायतकालदेखि नै प्रयास नभएका होइनन तर भएका प्रयासहरु सबै खेर जाँदा अहिले फेरि काठमाडौं उपत्यकामा फोहोर थुप्रिन पुगेको छ । २०५९-६० सालदेखि व्यवस्थितरुपमा यस्को समाधान गर्ने गरि काम अघि बढाइयो । तर १८ बर्ष वित्दा पनि कुनै तीनचौथाई काम पनि हुन सकेको छैन । फोहोर व्यवस्थापनका लागि नै अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरु पनि अघि सरे । तर उनीहरुलाई पनि फोहोर झै त्यसै गलाइयो ।
जान्दा फोहोरबाट मोहोर पनि बनाउन सकिन्छ । र, यस्लाई देशभित्रकै कतिपय स्थानीय तहले प्रमाणित गरेर देखाइपनि सके । तर काठमाडौसहित १३ वटा नगरपालिकाको फोहोरको बोझ बोक्दै आएको सिसडोलमा भने कुनै पनि त्यस्ता उपाय अपनाउन सकिएन जस्ले गर्दा फोहोरको समस्या ज्यूँका त्यूँ छ ।
फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐनको उपहास
अहिले सिसडोलमा उत्पन्न समस्याको कारण काठमाडौैले फेरि एकपटक फोहोरको बोझ बोक्नु परेको छ । काठमाडौं महानगर पालिकासहितका १३ वटा स्थानीय तहले नेपालको प्रचलित ऐन कानुनविपरीत फोहोरमैला व्यवस्थापनको काम गर्दै आएका छन् । फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन- २०६८ को दफा ३ ले फोहोरमैलाको व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ । सोही ऐनको दफा ६ मा फोहोरमैलाको पृथकीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थाअन्तर्गत स्थानीय तहले फोहोरलाई कम्तीमा जैविक र अजैविक गरी फोहोरको स्रोतमै छुट्याउने गरी तोक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर यो व्यवस्था कहिं कतै लागू भएको छैन । सबै फोहोर कोचीकोची एकै ठाउँमा राखिन्छ । न फोहोरको वर्गीकरण गरिन्छ नत फोहोरको विभाजन नै । धनकुटा, हैटौडा र वालिङ नगरपालिकाले यो सबै प्रक्रिया पूरा गरेर फोहोरबाट मोहर पनि कमाउन थालेका छन् भने आफ्नो शहरलाई फोहोरमैला मुक्त राख्न सफल भएका पनि छन् । तर काठमाडौ उपत्यकामा फोहोर राजनीति बढी हुन थालेको छ भने निजी क्षेत्र ठूलो कमाईमा पल्किन थालेको प्रष्ट देखिएको छ । त्यसैले उपत्यकामा अब क्रमभंगता, प्रभावकारी निर्णय र कार्यान्वयन आवश्यक भइसकेको छ ।
फोहोर व्यवस्थापनमा भएका केही प्रयासहरू
२०६० सालमा बञ्चरेडाँडामा सेनेटरी ल्याण्डफिल साइटको काम सुरु
फोहोरको झोल संकलन गर्न ३१ हजार वर्गमिटरमा २ वटा पोखरी निर्माण सुरु
१८ बर्ष वित्दा तीन चौथाई काम मात्र सम्पन्न
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम हुन नसकेपछि जाइकाले हात झिक्यो
२०६६ भदौ १४ को मन्त्रिपरिषद्द्धारा उच्चस्तरीय समिति गठन
फोहोरको व्यवस्थापनमा समितिमार्फत निजी क्षेत्रको प्रवेश
समितिले काम गर्न नसकेपछि २०६८ सालमा लगानी बोर्डलाई जिम्मेवारी प्रदान
फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ लागू भएपछि जिम्मा स्थानीय तहलाई
कुहिने र नकुहिने छुट्याएर पठाऔँ
अहिलेको काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरको प्रकृति हेर्दा यहाँ दुईतिहाई घरायसी फोहोर कुहिने प्रकृतिको पाइएको छ भने बाँकी नकुहिने खालका । तर कुहिने र नुकुहिने एकै ठाउँमा राखेर काठमाडौं उपत्यकामा गल्ती यहीबाट सुरु गरिएको छ । जस्लाई २६ किलोमिटर दूरीमा रहेको सिसडोलमा लगेर थुपार्दा बर्षौदेखि उनीहरु समस्यामा पर्न विवश छन् ।
क्रमभंगता तोडेर अब यसो गरे कसो होला ?
कर तिर्न आउ भन्दै घरघरमा पञ्चेबाजा बजाउँदै टोली खटाउन सक्ने काठमाडौं महानगरपालिकासहित अन्य पालिकाले अब घरघरमा पुगेर सचेतना जगाउन जरुरी छ । हरेक घरमा नै फोहोरलाई कुहिने र नकुहिने गरी वर्गीकरण गर्न लगाए ६० प्रतिशत बढी फोहोर त्यसै कम हुन जान्छ ।
घरघरदेखि स्कूल स्कूलसम्म, होटलदेखि अस्पतालहरुसम्म यो अभियान सुरु गरे वातावरणविद्हरु र वागमती बचाउ अभियानकर्मीहले पनि यो अभियानमा साथ दिने निश्चित छ । फोहोरको लागि अब परम्परागत क्रमभंगता नतोडेसम्म काठमाडौं उपत्यकामा यो समस्या जहिले पनि ज्यूँका त्यूँ रहने निश्चित छ ।